बन्दाबन्दिमा गाउँको सम्झना र कल्पना - Myagdi Online
बन्दाबन्दिमा गाउँको सम्झना र कल्पना
कोभिड–१९ ले निम्त्याएको बन्दाबन्दिमा धेरेले आफ्नाे गाउँ, घर सम्झे । देशभित्र भएका श्रमिक कैयाँै दिन कष्टसाध्य हिँडेर घरमा पुगे । विदेशिएकाले त्यसैत आप्mनो देश र घर सम्झने गर्दाहुन् । यो माहामारिमा विछट्टै सम्झे होलान । छट्पटिए होलान । रुँए होलान् । जन्मघर जस्तै कर्मघर कहाँ हुन्छ र ! उनीहरूका पिडाको कथा विस्तारै सुनाउलान् नै । पहिलेपनि गाउँमा लाहुरेहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको कथा सुनाउथ्ये । श्वास विस्तारै फेरेर सुनिन्थ्यो । नेपालीहरूले रोजीरोटीको लागि विदेशमा भोगेको पिडा आप्mनो देशमा फर्केर सुनाउने दिनको अन्त्य कहिले होला ?
धेरैले अनेक कुरा सम्झना, कल्पना गरे होलान् । जव मेरो वडामा राहत वितरणको दृश्य देखे, मैले झल्यास्स २०५२ सालभन्दा अगाडिको गाउँको परिवेश सम्झे । २५ बर्ष अगाडिको । खाडिमा लाम लाग्नका लागि घरैपिच्छे तीन चारवटा राहदानी बन्न थालेको यहीसालमा राज्यको नीतिगत परिमार्जनको कारणले हो । १० बर्षे जनयुद्धको सुरुवात भएको पनि यही सालमा हो । यद्यपी बैदेशिक रोजगारको ईतिहास उत्खनन् गर्दा बृटिस उपनिवेशमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो रोजगारको सकारात्मक पक्षपनि छन् ।
सम्झेको परिवेश यस्तो थियो ; मेरो गाउँमा दुईप्रकारका अन्न बेच्नका लागि जम्मा हुन्थ्यो । कुनै परिवारको बर्षभरी खान पुगेर उव्रिएको (सर्पलस) अन्न र अर्को समाजको अन्न । मकै, गहुँ, कोदो, जौँ, धान आदि जम्मा हुन्थ्यो । कोदो धेरै बर्षसम्म पनि जस्ताकोतस्तै रहन्छ । उव्राउने परिवारले कोदो बर्षौसम्म पनि राख्थे ।
कसरी जम्मा हुन्थ्यो समाजको नाममा अन्न ? गाउँमा विभिन्न संस्कारहरू हुन्छन् । जस्तै, क्रियाकर्म, छेवार, पुत्बराई (पुत्रबधाइ), विवाह इत्यादी । यी संस्कारमा परम्परागत् नाँच सिंगारु नाच्ने चलन अनिवार्य थियो । उक्त नाँचमा गाउँका सबैले एकमाना अन्न, दुईचार रुपीयाँ पैसा सिंगारुलाई चढाउने गर्दथ्ये । यसलाई “दान दिने” भनिन्थ्यो । उक्त अन्न र पैसा समाजको (मगरहरूको परम्परागत अनौपचारिक संस्था) नाममा संकलन हुन्थ्यो । तिहारमा देउसी खेलेर पनि जम्मा हुन्थ्यो । संकल भएको अन्न र पैसा निश्चित व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर राख्ने गर्दथ्ये । पैसा सामाजिक काममा खर्च गर्दथ्ये । जस्तै सामुहिक पुजागर्दा समाजको नाममा जम्मा भएको पैसाले राँगा, बोका, भेडाको साँढ, कुखुरा आदि किन्ने गर्दथ्ये । नपुगेको पैसा प्रत्यक परिवारले उठाउनु पथ्र्यो । वर्षमा एकपटक सिद्ध, भुमे पुजा, पञ्चबली हुन्थ्यो ।
जम्मा भएका अन्न धेरै घरधुरीलाई खाद्यसंकट परेको अवस्थामा निकालिन्थ्यो जसलाई “समाजको भकारी फोड्ने” भनिन्थ्यो । आवश्यकता भएको परिवारले किन्नु पथ्र्यो या ब्याजमा लैजानु पथ्र्यो । कथम कुनै वर्ष अनिकाल नपरेको खण्डमा त्यो रहिरहन्थ्यो । अतिआवश्यक परेकाले परिवारले बार्षिक लैजाने गर्दथ्ये ।
अन्न उव्राउने परिवार धेरै हुँदैनथ्ये । पाँच, छ घर भएपनि गाउँमा खाद्यसंकटलाई धान्थ्यो । टाढा बेसागर्न (किन्न) जानु पर्दैनथ्यो । खाद्यसंकट भएको अवस्थामा पालो गरेर व्यक्तिको भकारी फोड्ने चलन थियो । समाजमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पहलमा भकारि फोड्ने गर्दथ्ये । अनिकालमा बजारबाट चामल लैजानु पर्दैनथ्यो । खाद्यसंकत टार्ने अति राम्रो परम्परागत अभ्यास थियो । गाउँमै खाद्य व्यवस्था हुन्थ्यो । कृषीको स्वरुप निर्भाहमुखि थियो । अझैपनि छ । अथवा बजारमुखि थिएन । र, कपिय घरधुरीको निर्वाहमुखी कृषी भएपनि अन्न उव्रिएर बस्थ्यो । सबैको सानोतिनो खेतबारी थियो । त्यसलाई कज्याउने युवाशक्ति गाउँमै थिए । प्रायः खाद्यसंकट पर्दैनथ्यो । खेतबारीका कुनाकाप्चि सबैमा लहलह अन्नबालीले झपक्क छोपिन्थे । पशु चौपायपनि प्रसस्त थिए ।
अनि अहिले ? अहिले कथामात्रै बाँकी छ । पहिले कज्याएका खेतबारी झपक्क जंगलले छोपेका छन् । भु—उपयोग साँघुरो भएको छ । उब्जनी गर्ने युवाहरू विदेशमा छन् । बसाँईसराई तिब्र छ । स्थानीय खाद्यान्न, कोदो, मकै, जाैँ गहुँ, धान, बजारे चामलले विस्थापित गरिदिएको छ । मोटरबाटो पुगेसंगै तरकारी भारतबाट गाउँगाउँ पुग्ने छन् । लगाएको अन्नबाली जंगली जनावरको सजिलो आहारा हुन्छ । खेति लगाउनेले च्याख् मरेर छोडिरहेका छन् । कसैको घरमा उव्रिएको अन्न हुँदैन । नत समाजको नाममा हुन्छ ।
परम्परागत संस्कृति शहर पसिसकेका छन् । गाउँमा प्रत्यक्ष देख्न पाइन्न । फेसबुक, युटुवको ट्रेन्डीङमा छन् । यी प्रविद्यि विकास गर्ने थोरै मालिकहरूले पूँजी केन्द्रिकरण गरेका छन् । सबै अदृश्य बजारको तिखा नङग्रासहितको पंञ्जामा छन् । संस्कृति विकाउ माल बनाइएका छन् । समाजसंग जिवन्त गाँसिएका संस्कृति दिउँसै बत्तीबालेर खोजेपनि नपाइने अवस्थामा छन्, गाउँमा । नाँच्ने, गाउने, हाँस्ने, फोट खिच्ने सबका सब बजारका लागि । पहिले जस्तै स्वतस्फुर्त समाजको भलाइको लागि भनेर सिँगारु नाचिन्न, रोधी बसिन्न, दोहोरी, यानीमाया गाइन्न । सबै छन् । तर बजारले निर्देशित अवस्थामा छन् । केवल व्यक्तिगत लाभको लागि । पूँजीवाद्ले विकाउमाल नबनाएको के होला र ?
किन सम्झे ? यदी ०५२ साल अघिको अवस्था भए मेरो वडामा राहत वितरण अति सजिलो हँुदो हो । समाजले निर्णय गरेर अन्न वितरण गथ्र्यो । वा व्यक्तिको अन्न भकारी फोेडेर स्थानीय नीकायले किनेर वितरण गथ्र्यो । पोषिलो अन्न खादा हुन् । अन्य प्रकारको विपद्मा पनि खाद्य वितरण गर्न सजिलो हुँन्थ्यो ।
यसो साेच्छु ! मोटरबाटो विग्रेको अवस्थामा विप्द परेको भए बजारबाट खाद्यान्न पुरयाउन कति दिन लाग्दो हो ? भोकाएका जनता, बालबालीका, बृद्धाबाट प्रतिनिधीले नानाथरी गाली खानु पथ्र्यो होला ? धन्न हो ! बाटो नविग्रिएको अवस्थामा यो विपद् परयो । अझ अषाढ् श्रावणसम्म अवस्था यस्तै रहयो भने गर्ने के ? गाउँमा पहिले जस्तै न समाजको अन्न छ, न कुनै परिवारको उव्रिएको अन्न ? पैसा भएको र खाद्यान्न नभएको अवस्था आइपरे होला के ? भोकमरी पनि विपद्नै त हो । कतै यसको चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा त छैन ?
कल्पना गर्छु, युवाहरूलाई आमरुपमा बिदेश नपठाएको र कृषीलाई बजारमुखि बनाएर उकासेको भए अहिले अधिकाँश स्थानीय तह खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने थिए । समुदायका परम्परागत सामाजिक संस्था र संस्कृतिहरू जिवन्त हुने थिए । अझ बलिया र दिगो हुने थिए । यो माहामारिमा बजारबाट चामल लिएर राहत वितरण गर्ने अवस्था नहुँदो हो । कति गाउँपालिका राहत वितरण गर्नुपरेन त्यो आँकडा अहिले छैन । विस्तारै आउला पनि ।
कोभिड–१९ले विश्वलाई हायलकायल बनाएको छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा ध्वँस मच्चाएको छ । नेपाल राज्यले जोगी पारामा दुईहात फैलाएर माग्दै आएका दाताहरूनै “आफँै त महादेव उत्तानो पर, कस्ले देला वर” भएका छन् । चन्द्रमामा वा अन्य ग्रहमा बस्ति बसेको छैन । नत्र हाम्रा शासकहरू माग्नलाई त्यहाँ जादा हुन् । रोजगारका लागि युवाहरूलाइ त्यहाँ पठाउने नीति बनाउदा हुन् । अहिलेलाई धर्तिमा माग्ने ठाउँ छैन । आखिर जोगी संस्कृति न हो नमाग्लान भन्न कहाँ सकिन्छ । वर्तमान समयको चर्चित लेखक तथा इतिहासकार नोभल योहा हारारीले कोभिड्माथि विजय प्राप्त गर्ने दुईवटा तर्क पेश गरेकाछन्ः क) हामीसंग विज्ञान र ख) बुद्धिमत्ता छ । त्यसकारण कोभिड हार्छ । कति मान्छे मरेर जित्ने हो थाहा छैन । औषधीको विकास नहुँदासम्म लडाँइ जारिनै रहने भयो । बैज्ञानिकहरूको लडाँइ जारी छ ।
सबैलाई ज्ञात् छ विपद्ले सामाजिक, आर्थिक, राजनीति उथलपुथल पारेर जान्छ । त्यसलाई पुनस्र्थापना वा पुननिर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबैभन्दा ठुलो चुनौति हो । भनिन्छ हरेक विपद्ले नयाँ अवसर दिन्छ । अवसरलाई चिन्ने, योजना बनाउने र उपयोग गर्ने राज्यले नीति बनाउनु पर्दछ । विदेशबाट उर्जाशिल युवाशक्ति फर्कने छन् भन्ने सर्वत्र आँकलन गरिएको छ । कति प्रतिशत फर्कन्छन् पछिको कुरा भयो । बैदेशिक रोजगार पहिले जस्तै नहुने पक्का भयो । खाडि देशहरू तेल बेचेर धनी भएका हुन् । तेलको मुल्य नराम्री खस्केको छ । त्यहाँ लगानी गर्ने विभिन्न देशका कम्पनिहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । र, कोभिडको सामना गरिहेका छन् । त्यसकारण फर्कने निश्चित छ ।
भुकम्पले चौँधो जिल्लामा घर ध्वँस्त पारयो । पुननिर्माण गर्न बैदेशिक रोजगारले ठूलो राहत दियो । अव अवस्था त्यस्तो रहेन । घर जस्ताकोतस्तै छ । तर कृषीे ध्वँस्त भएको लामो समय भयो । ग्रामिण कृषीमा विपद्नै आयो । यसलाई पुननिर्माण गर्ने अवसर हुनसक्छ, कोभिड–१९ । किनभने धेरैको अनुमान छ की युवाहरू गाउँ फर्केर कृषीकर्ममा लाग्नेछन् ।
सुनेको भन्दा देखेको सत्य । पर्खौ र हेरौँ । कल्पना गरौँ न ! हामीले गाउँमा बजारबाट किनेर खाने चामल उत्पादन नहुने महाविपद् आयो भने अवस्था कस्तो होला ? मानौँ भारतमा कुनै विपद्का कारण धान उत्पादनमा ठुलो ह्रास आयो भने के गर्ने ? नआउला भन्न कसरी सकिन्छ ? अषाढ् श्रावणसम्म कोरोनाको महामारी रहयो भने तराईमा धान लगाउने अवस्था रहदैन । छिमेकी भारतमा पनि अवस्था त्यही भयो भने ? त्यसैत जलबायु परिवर्तनले भारतका कयौँ राज्यका खेत सुख्खा भएका समाचार पढिन्छ, जहाँको चामलमा हामी निर्भर छौँ ।
आशा गराँै ! यदी हुलकाहुल यूवाहरू गाउँफर्के भने जंगल र झाडीले छोपेका खेतबारिलाई पुनःखेतियोग्य बनाउलान् । गुजारामुखि कृषी पक्कै लाग्ने छैनन् । त्यस्तो कृषी प्रणालीले युवाको बढ्दो चाहना पुरा गरेको थिएन, र त विदेशिन वाध्य थिए ।
आफैले नगरे पनि बिदेशमा बजारमुखि कृषी देखेका छन् र गर्ने छन् । अन्न उव्राएर राख्ने छन् । राज्यले सोही अनुसारको नीति बनाउला र आवश्यक पनि छ । आप्नो परम्परागत् जिबन्त संस्कार संस्कृतिलाई पुनर्जिवित गर्लान् । विभिन्न संस्कार गर्दा मारुनी, सिँगारु नचाँउलान् । अन्न र पैसा जम्मा गरेर समाजलाई बलियो बनाउलान् । विभिन्न विपद्मा खाद्यसंकट सजिलै टार्ने उपाय सोँच्लान् । नेताको भाषणले होइन गाउँलाई “स्वीजरल्याण्ड” बनाउने उर्जाशिल युवाहरू हुनेछन् । यो ठूलो अवसर हो ।
संस्कृति मनोरञ्न गर्ने थलो मात्रै होइनन् सामुहिक समस्या समाधान गर्ने माध्यम पनि हुन् । राम्रा संस्कृतिलाई पुनर्जिवित गरे आप्mनो पहिचान पनि जिवन्त हुन्छ । डिस्को नाँचेर अन्न र पैसा जम्मा हँुदैन । त्यसको लागि संस्कारहरूमा सिँगारु नाँच्नै पर्छ, जुन हाम्रा पुर्खाले गरेका थिए । जो आस्था संग गाँसिएको हुन्छ । आप्mनै संस्कृति समुदायले उपभोग गर्ने अवसर पाउछन् । सामुहिक गौरव हुन्छ । आशा गरौँ युवाहरू गाउँफर्के पछि राम्रा संस्कृतिको पुनर्जिवित गर्नेछन् । अहिले सम्झन्छु, समाजको नाममा अन्न र पैसा संकलन गर्ने उत्तम संस्कृति रहेछ । विस्तारै भुल्दै गयौँ । त्यो एक प्रकारको विपद् व्यवस्थापन कोष जस्तै थियो । पुर्खाहरूले त्यस्तो संस्कृति विनाउद्देश्य विकास गरेका थिएनन् होला । अव स्थानीय तहले पनि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । मुर्त अर्मुत संस्कृति संरक्षण गर्ने स्थानीय तहको अधिकारमा उल्लेख छ । सबै परम्परागत संस्कृति उत्तम हुदैनन् । उत्तम संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक देखाइदियो कोभिड–१९ ले । संस्कृतिलेनै मानवलाई अन्य प्राणीजगतबाट अलग देखाएको हो ।
र, अन्तमा गाली खाएको सम्झे । सानो छदाँ “तलाई हैजाले खाने” भन्थे । के भनेको होला जस्तो हुन्थ्यो । शाब्दिक कारण थाहा हुँदैनथ्यो । खोजिएन पनि । अहिले अनुमान लगाउछु हैजाले ठूलो महामारी लिएको थियो होला, कोरोना जस्तै । त्यो हैजाको महामारिसंग हाम्रा कुनै पुस्ता पक्कै जुधेको हुनुपर्छ । त्यसपछि यो गाली विकास भएर पुस्तौनी सर्दै आयो होला । मानव समाजमा रोग महामारी समयसमयमा आइराख्दो रहेछ भन्ने नभुँलाैँ । त्यो गालि परिवर्तन भएर “कोरोनाले खाने” भन्ने नयाँ गालिको शब्द विकास भयो भने आश्चर्य नहोला की !
धौलागिरी गाउँपालिका –२
Relevant and analytical. Every youth will not return to agriculture but it would still be better if only few of them take it up with efficient know how and technology.